What Doesn't Kill Me — Trip LEE - OFISIALY SITE
Rehefa mandeha ianao amin'ny alalan'ny fotoana mafy, foana ny olona tsy mahalala izay holazaina. Ny vokany dia dikany clichés na trite ezaka mampahery anao. Foana aho nanana olana tamin'ny Cliché phrases- ny karazany izay tsy midika na inona na inona ho azy ireo ny olona nanao hoe: ka tsy tena manampy ny olona mandre azy ireo. Zavatra adaladala toy ny, "Chin ka" sy ny "Tsy Ho hahazo tsara kokoa." Tena? Ahoana no ahafantaranao? Tsy manao ny namana rehetra sitraka amin'ny fanomezana azy ireo fahazavana, fluffy ireo fanantenana izay tsy miorim-paka ao na inona na inona. Rehefa fanaintainana lalina Hits Hanozongozona mila mafy orina ny fahamarinana mba hanohana antsika.
Nandritra ny bout amin'ny homamiadana, Christopher Hitchens Naneho fahasorenana toy izany koa amin'ny sasany ny dikany andian-teny no manary manodidina. Mandany vitsivitsy izy pejy manafika ny iray tamin'izy ireo tao amin'ny boky, fiainana an-tany. Hoy izy, "Manokana, Efa kely nitsahatra namoaka ny fanambarana fa 'na inona na inona tsy hamono ahy mahatonga ahy matanjaka.' "Izy avy eo hoe:, "Ao amin'ny tontolo ara-batana masiaka ... misy koa zavatra maro rehetra izay mety hamono anao, tsy hamono anao, ary avy eo hamela anareo ho malemy be. "Tsy mba afaka mahatsapa ny fifaliana?
Izany toa mahakivy, Mihevitra aho fa marina Hitchens Azo lazaina. Tsy dia tena azo atao fa afaka mandeha amin'ny alalan'ny zavatra sarotra izay ihany no hampihena antsika sy hitondra antsika ho akaiky kokoa ny fahafatesana. Azoko sary an-tsaina ny olona iray mametraka ny fanontaniana, “Ahoana no zavatra mahatsiravina izany ho ahy matanjaka?” Na dia ny tsara indrindra ny olona azo rava noho ny herisetra ny tontolo lavo. Fanantenana ihany no velona maro nokapohina mandra-manapaka, ary ny zava-misy farany KARENA izany. Andian-teny izay mahafatifaty naneno indray mandeha izao toa tsy misy ilana azy. Fa ny tsara fikasa fihetseham-po mandrakizay Hitchens nanafika marina? izay raha ny hevitro.
"Inona no mahatonga ahy tsy hamono ahy matanjaka" afaka ny ho marina, fa raha misy zavatra mihoatra noho ity fiainana ity. Raha ity fiainana ity, izao tontolo izao, ary izany vatana rehetra misy, Hitchens marina. Tena lainga. Ho toy ny hoe:, "Inona no tsy tanteraka amin'ny fiarako mahatonga azy io matanjaka." Tsy mitombina izany fihetsika. Ianao dia tsy maintsy tsy miraharaha ny fahamarinana ny mino fa. Fa raha tsy maharitra ny fitsapana manana karazana heviny mandrakizay izany Miova ny zava-drehetra.
I Paoly dia milaza amintsika, "Ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra sy voantso araka ny fikasany rahateo." Io andininy indraindray ampijalina, fa ny iray amin'ireo fampanantenana tsara tarehy indrindra amin'ny rehetra ao amin'ny Soratra Masina. Izany akory tsy midika fa ny Kristianina dia mety resy. Isika rehetra dia hiatrika fitsapana, nefa tsy afaka ho resy farany ireny. Na dia ny fahavalony ratsy indrindra, toy ny fijaliana sy ny fahafatesana, ho namantsika ao amin'i Kristy, satria izy ireo amin'ny farany miasa ao amin'ny famindram-po.
Koa ahoana marina no nandravarava ireo raha ny marina fitsapana mafy orina kokoa ho antsika? Ireto misy fomba telo (amin'ny manan-danja hifanindry):
1. Ho antsika izy ireo miankina amin'ny Jesosy
Rehefa tsapako toy ny zava-drehetra teo amin'ny fiainako dia mandeha tsara, ny foko avy hatrany retreats ho tena fiankinan-doha. Izany tsy ho levona mandrakizay. Manomboka mivavaka aho satria tsy mihevitra subconsciously tsy nisy zavatra nahory. I ho mirehareha satria mieritreritra aho ny antony tsara no mitranga ny zava-drehetra. Tamin'izany fotoana, Manadino aho fa Andriamanitra no manome ny zava-tsoa, ary izaho mbola mila Azy mba manohana ahy. Mihevitra ho manana ho aho fa ireny hoe aho rehetra famindram-pony.
Fa rehefa tonga ny fitsapana lalana, dia mampiseho antsika amin 'ny fahalemena. Mampahatsiahy ny fomba ny aretina marefo isika, mametraka-offs mampahatsiahy antsika fa ny asa mafy tsy miantoka na inona na inona, ary ny ady mampahatsiahy antsika fa mila an'i Jesosy isika amin'ny faritra rehetra eo amin'ny fiainantsika.
2 Corinthians 12 dia tonga fampiononana ahy amin'ny fotoam-fahalemena. Paoly dia manaiky fa Andriamanitra nanome azy ny fitsarana mba "hitandrina [azy] avy amin'ny lasa mieboebo. "Ary hoy izy faly fa mirehareha ny fahalemena, ary dia ny afa-po isan-karazany ny fitsapana rehetra. Ahoana no mety ho afa-po i Paoly, ary faly mihitsy aza momba ny fitsapana? Mino aho fa i Paoly no nilaza fa fitsapana ireo mazava fa mila ny fahasoavana sy ny hery. Tena-fiankinan-doha dia fahalemena, ary ny fiankinan-doha amin'ny Kristy no hery. Hoy àry i Paoly, "Rehefa malemy aho, dia amin'izay aho no mahery. "
2. Izy ireo ho antsika bebe kokoa an'i Jesosy
Ho isika tsy ho afaka hiaritra fitsapana manimba mandra-takatsika fa ny fampiononana sy salama tsara dia tsy izay no tena zava-dehibe. Fampiononana sy ny fahasalamana dia zavatra tsara fa homem-hanome antsika. Fa voalohany indrindra ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika dia ny ho tahaka an'i Jesosy. Ary Izy na dia vonona ny hampiasa fitsapana mba hanatanteraka izany. Hebreo 12 hoy i, "[Andriamanitra] hananatra antsika noho ny soa, mba hizara ny fahamasinany. "Training ao amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena dia mety handratra indraindray, fa Izy no hahatonga antsika ho mafy orina kokoa.
James 1:2 tonga ao an-tsaina, izay milaza amintsika mba "ataovy ho fifaliana avokoa, ry rahalahy, rehefa mihaona fizahan-toetra isan-karazany…"Ny antony dia tokony ataovy ho fifaliana dia ny an'i Kristy dia mamokatra toetra amam-panahy. Ny fanetren-tena no zava-dehibe noho ny fahasambarantsika. Tsara kokoa ny ho malemy ara-batana sy ara-panahy matanjaka.
3. Ho antsika izy ireo mba ho ela niaraka tamin'i Jesosy
Ny fontsika dia malemy ny fahotana, ary isika dia matetika mahita ny tenantsika maniry ho bebe kokoa ny zavatra eto amin'ity tontolo ity tsy maintsy atolotra. Fa raha ny tsy maharitra fifaliana eto amin'ity tontolo ity dia nalaina avy amintsika, Nampahatsiahivina isika fa ny tany no tsy ny an-trano. Any an-kafa ny fanjakantsika dia.
Tiako ny mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny tsara, ary rehefa manao Miezaka hanararaotra ny perks rehetra. Fa dia manomboka ny malahelo ny vadiko, ary avy eo dia tonga saina aho tsy manana ny akanjo no natao mba hitondra, ary avy eo aho dia tonga saina efitrano ny fanompoana momba ny antsasaky toy ny vadiko ny mahandro sakafo. Mampahatsiahy ahy ny trano fandraisam-bahiny ity dia tsy ny an-trano. Indramina no tsy feno faniriana manao ahy ho ela ao an-trano. Ity tany ity dia tsy izay an'ny, sy ny fitsapana mampahatsiahy antsika fa ny paradisa dia any an-kafa, miaraka amin'ny Tompo. Tsy hisy indramina no tsy feno faniriana any an-danitra, satria ny Tompo dia fahafaham-po ny faniriana rehetra. Ho hanafoana ny fanaintainana izy ka aidino ny fahasoavany avy amintsika mandrakizay.
Dia amin'ny manaraka ianao manana namana handeha amin'ny alalan'ny fotoana mafy, mampahatsiahy azy ireo fa na dia ny toe-javatra mampalahelo indrindra ho antsika dia afaka mafy orina kokoa. Tsy amin'ny alalan'ny fisainana tsara sy ny fanantenana, Fa ny tena fanantenana sy ny tena fiovana. Ary raha ianao handeha amin'ny alalan'ny vanim-potoana sarotra, Aoka Akaiky Kokoa amin'i Kristy. Aza matahotra, ny Tompo no momba anao.
Ny mpino ny fanantenana dia any ankoatry ny fasana, ary eo amin'ny fiainana amin'ny manaraka isika, Ho toy ny sy miaraka Aminy. Noho izany dia inona no mahafaty antsika mahatonga antsika ho mafy orina kokoa.
emr • Septambra 17, 2013 amin'ny 2:06 PM • navalin'i
Buddy • Septambra 17, 2013 amin'ny 2:25 PM • navalin'i
Thanks diany, izay mihitsy no nilaiko mba hihaino fotoana izao. Ary rehefa nandroso amin'ny alalan'ny fotoana faran'izay sarotra sy ny fahamarinany mba hampionona ny zanany tsy ho levona mandrakizay velively mampitolagaga ahy.
kwena Albert • Septambra 17, 2013 amin'ny 2:39 PM • navalin'i
Awesome piece.I hanao hiala amin'ny mahazatra cliches sy torohevitra fa ireo izay fanaintainana avy androany nanomboka hijery ny ho any amin'ny vatolampy izay avo noho i..Thank ianao tompoko
Michael • Septambra 17, 2013 amin'ny 2:55 PM • navalin'i
Izany no kely mahagaga ny mamaky. Tsy mbola tena nieritreritra tsara teny amin'ny toe-javatra ratsy ny maha zava-dratsy. saingy, indray, fa ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fa afaka mitantana ny alalan 'ny fotoana sarotra sy mahatsapa fa misy zavatra lehibe noho izao tontolo izao. Inona no tsy hamono ahy, na manao, mahatonga ahy mahery satria mitaona ahy ho akaiky kokoa an'Andriamanitra.
Franky • Septambra 17, 2013 amin'ny 3:41 PM • navalin'i
Nifoha aho io maraina io ary mahatsapa mieboebo karazany untouchable mino fa satria ny ankamaroan'ny zavatra teo amin'ny fiainako tamin'ireny nandeha tamin'izany Eny, dia tsy mila matoky an'Andriamanitra kokoa. Diso aho, ary nampahatsiahivina izany tena avy hatrany ho toy ny andro dia mandroso amin'ny. Misaotra anao noho ny fahalalana toy izany, ary mangataha amin'ny Tompo aho haneho amiko anie ny fahasoavana ka hitondra ahy ho afaka izay itoerako.
Ny rahalahy ao amin'i Kristy
raenee • Septambra 17, 2013 amin'ny 6:06 PM • navalin'i
Ry Mr.trip Lee,
Tia izany fotsiny aho (: Manana fanontaniana ny fiangonako dia tena manao ny andian-dahatsoratra “inona eto an-tany aho no eto ho an'ny?” N im amin'ny mpitarika ny tanora ary aho ho manao ny lesona ny maha-mpianatra sy ny zavatra rehetra nanao hoe: fifandraisana amin'ny tsara hahatonga ny ny fizarana dia miankina amin'ny andriamanitra nandritra ny lalana… ka raha afaka aho ny OK mampiasa ny sasany ny amin'ny fanakareo? Toy ny Lil nalaina na ny soratra masina afa-tsy amin'ny permisson …. I mafy tia ny amin'ny fanakareo sy ny diffently manampy ahy hivoatra ho kristiana (: misaotra anao noho ny maha-olona ny andriamanitra N fanajana ny fiantsoana ho any an fitoriana. Andriamanitra mahery vaika sasany iany manao zavatra eo amin'ny fiainanao sy ny fiainana familys (:
Joel • Septambra 17, 2013 amin'ny 6:39 PM • navalin'i
Tiako enao dia.. Tena manao Rahalahy!
GabeTaviano • Septambra 17, 2013 amin'ny 6:47 PM • navalin'i
Efa ho roa taona marokoroko, ary ity lahatsoratra ity fotsiny marina Hipoaka amin'ny fahamarinana. Be ihany amin'ny zavatra ilaina noho izany rain'ny telo ankizivavy, ary ny vadiny ho amin'ny mpanoratra sy ny mpandahateny izay efa niova hafatra avy amin'ny zava-tsarotra ny fanambadiana sy ny reny ny faharetana, rehefa toa very rehetra.
ny lalana, Mety ny amiko, ny foto-kevitra no hira tao anatin'ny roa taona, Trip. Tsy crank misy hira mafy, ary tsy afaka ho nangataka an'Andriamanitra ny penina teny izay niteny tsy lalina ny fanahiko. Misy fotoana, raha ny kely indrindra na dia eritreritra ny hamono tena niampita an-tsaiko. Antoka ianao mahatsiaro ho toy ianao ady, rehefa izany no marina fahamarinana.
Fa tena fanantenana sy ny tena fiovana dia mendrika izany kokoa noho ny fanomezana ny. Izany no tena marina. Misy ady mba ho niady ho antsika tsirairay. Mankasitraka anareo aho maka ny fotoana penina ireo teny ireo, Trip. Aho dia namaky amin'ny alalan'ny lahatsoratra ity vitsivitsy fotoana bebe kokoa. Nidera an'Andriamanitra noho ny miteny amin'ny alalan'ny anareo amin'ny earbuds, eo amin'ny sehatra, amin'ny polipitra, ao an-tokantranonao, ary amin'ny aterineto.
Liam • Septambra 17, 2013 amin'ny 8:17 PM • navalin'i
Trip, manoratra foana ny olona! Ny lahatsoratra roa farany no niteny tamin'i tena izay aho amin'ny eo amin'ny fiainana sy tonga aho nahita azy ireo fotsiny aho rehefa nila. Andriamanitra dia isalasalana fa miasa amin'ny alalanao ianao.
Carlota • Septambra 18, 2013 amin'ny 12:50 aho • navalin'i
Izay no manampy ahy hoy mba hahatakatra somethings ary midika alot ho ahy. Ny hafatra alot mifandray amin'ny zavatra no mandalo fa ny 5 taona, ary mbola mandeha amin'ny alalan'ny now.Thank ianao Trip Lee.
manaraka ndekai • Septambra 18, 2013 amin'ny 4:06 aho • navalin'i
marina izany ho an'ny kristianina izay mandeha amin'ny finoana fa tsy amin'ny sight.i ho amin'ny fotoan-tsarotra; izay ny zava-drehetra dia fandehanan'Andriamanitro, fa Izaho expectations.It lasa aza mafy kokoa mba hitandrina ny matoky ao amin'ny Tompo, fa satria fantatro fa ny fanaintainana aho ary miaina dia vonjimaika natao ho ahy matanjaka tsy handringana me.i natao an'i Jesosy ary eto aho aho, dia nahery.
Charles • Septambra 18, 2013 amin'ny 4:11 aho • navalin'i
Mino aho fa manana io lahatsoratra io dia mirakitra be dia be ny fahamarinana. Azo antoka toy ny mpino izay no hahafaty ahy, na manao ihany no mahatonga ahy matanjaka. Andriamanitra anie hitahy anao ka hanome anao ny fahendrena mba hiteny bebe kokoa momba ny fahamarinana ho ny vahoakany.
Kathryn • Septambra 18, 2013 amin'ny 9:31 aho • navalin'i
Misaotra noho ity hafatra ity. I no tena nampahery ahy satria efa manana fotoana sarotra ho an'ny manodidina 12 taona, miady miaraka amin'ny fahita mihitsy izany aretina sy tena te handalina ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Aho amin'ny fotoana izay amin'izao fotoana izao fotsiny aho mahatsiaro ho ngoly ny fihetseham-po, fa mino aho fa ny Fanahy Masina no mampirisika ahy hatoky an'i Jesosy sy miantehitra Aminy.
Amanda • Septambra 18, 2013 amin'ny 11:03 aho • navalin'i
Toy izany ny lahatsoratra nohazavaina ary tena manampy anao ny zava-misy fomba fijery, very fotsiny ny rahalahiko 3 volana lasa izay ny maro myeloma sy ny Neny dia ao amin'ny dingana mafy ny dementia fantatro fa mba ho afaka ny hiatrika tsy maintsy hanatsoaka ny hery avy amin 'Andriamanitra, ary mifalia fa ny andro talohan'ny handeha izy, aoka aho hitarika azy ho any amin'ny Tompo ary nanome ny ainy. Tohizo ny asa tsara, ianao dia mitaona fanahy ny 18 taona zanany mba hanoratra mozika sy haharaka ny Piano, mijanona voatahy!
Corrie Reynolds • Septambra 18, 2013 amin'ny 11:13 aho • navalin'i
Ianao foana ny fomba fanaovana an-teny izay heveriko fa tsy afaka ny hanoratra aho. Manana talenta marina maro. Misaotra anao mampiasa azy ireo ny zavatra no niantsoana anareo mba hanao. Andriamanitra anie hitahy anao rahalahy.
DeniseSheppard • Septambra 18, 2013 amin'ny 12:08 PM • navalin'i
Mr. Barefield…….ianao no tena tsara, mamirapiratra ohatra ny fitiavan'Andriamanitra. Ary efa nitahy anao tamin'izay Lyric mba hizara ny hafatra. Faly aho mamaky ny zavatra soratanao, mihaino ny mozika sy ho tia ny hihaino anao amin'ny olona sasany ny fotoana. Misaotra noho ny fankatoavana eo amin'ny fizarana ny teny; foana, tsara, manome hery sy marina amin'ny teboka! Tsara Misaora Anao Rahalahy!
BrandonPulley • Septambra 18, 2013 amin'ny 12:30 PM • navalin'i
Very ny asa amin'izao fotoana izao ary tsy afaka milaza aminareo fa tena ny valiny ny vavaka izany! Rehefa nandao foana aho niantsoantso milaza amiko izay tokony hatao lazao amiko azafady. Ankehitriny dia fantatro. Mila aoka ianao hanetry tena sy tonga saina ny asa manaraka ahy izy dia azy fa tsy ny asa!
Harry Nanthambwe • Septambra 18, 2013 amin'ny 3:24 PM • navalin'i
Izao Hs izay tiako foana 2 handre ary vakio. Derao Andriamanitra 4 U Bra.
Tendai • Septambra 18, 2013 amin'ny 7:41 PM • navalin'i
Izany no zavatra mampahery, rahalahy. Misaotra anao noho ny mampahatsiahy ahy ny filazantsara; ny fototry ny fiainana kristianina rehetra.
Gomezgani Hoy i • Septambra 19, 2013 amin'ny 12:46 PM • navalin'i
Amen ho izany olona izany!
Debbie • Septambra 19, 2013 amin'ny 9:09 PM • navalin'i
Ny fanazavana ny razantsika dikany foana Ampianaro aho. Misaotra anao dalana sy re hatrany hanampy mba hanokatra ny masoko.
Sembereka Paul II • Septambra 21, 2013 amin'ny 5:19 aho • navalin'i
Amen, Fitahiana ho anao.
Bobby • Septambra 22, 2013 amin'ny 9:52 PM • navalin'i
Mitory izany hamandrika!
Sunge • Septambra 24, 2013 amin'ny 3:30 PM • navalin'i
Amen. Misaotra betsaka noho ny toe-tsaina feno tari-dalana sy fampianarana. Love bilaogy ity!
Kaila • Oktobra 3, 2013 amin'ny 2:58 PM • navalin'i
Manaiky aho fa matetika ny olona, ​​rehefa manolotra fotoana ny teny no ampiasaina, tsy foana ianao ho tsara kokoa. Izaho sy ny fianakaviako nahatsapa fa fahavaratra ity eo amin'ny mpiray tam-po ny fandevenana. Izy dia voatifitra ka maty ny olona iray izay heverina ho namana, roa andro talohan'ny faha-19 andro nahaterahana. Tsy misy ny antsoina hoe teny mampahery ireo, satria manampy ny fanontaniana lehibe nanana isika rehetra dia, ” Nahoana izy, fotsiny izy 'zazakely?” saingy, rehefa afaka izany, jery todika izahay ary mahita fa na dia dia mampalahelo fotoana izany dia nitondra ny fianakaviana hifanatona kokoa sy handinika indray ny fifandraisana amin'ny samy izy sy amin'Andriamanitra. Isika nahazo vaovao ihany koa ny fianakaviana tsy ela rehefa afaka ny vavy, izay mety ho ny kambana.
Angie • Oktobra 3, 2013 amin'ny 5:03 PM • navalin'i
Izany no ilaina ny mamaky ity amin'izao fotoana izao. hotahian'andriamanitra anie ianao.
CynthiaAghomon • Oktobra 4, 2013 amin'ny 1:09 PM • navalin'i
Izany dia izany dia tsy nahomby encouraging..God ary tsy momba ny hanomboka akory va ny children..we mila mitandrina fotsiny fanantenana velona ka mino fa Izy no tsy handao antsika na hahafoy antsika. Romanina 8:18 Hoy Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao fotoana ankehitriny dia tsy tokony hoharina amin'ny voninahitra izay haseho ao amin'ny us..amen
Nanofa • Oktobra 10, 2013 amin'ny 1:59 PM • navalin'i
indray, Efa tapaka am-po!Izaho no marary amin'izao fotoana izao, ary dia manontany tena ny antony aho, ny Tompo dia ny famelana izany dia nanjo ahy. Araka ny fahasorenana aho tamin'ny nandeha namaky ny pejy FB ny toerana tena Celebs ary nahita ny namany Sary. Indrisy! Ny Tompo ary namaly ny fivavako niteny mivantana amiko! (Amin'ny alalan'ny Trip) Toy Trips hafatra dia mifanaraka fotsiny ho ahy (Izany dia satria ny Fanahy Masina no mampiasa azy mba hanompo ho antsika)….Andriamanitra mananatra ahy foana alalany (ny mozika,blaogy sy ny toriteny) Heveriko aho mifantoka be amin'ny trano fandraisam-bahiny ity fa tsy ny an-trano. Koa ankehitriny dia fantatro mahatonga ahy marary (ny zavatra ny Tompo dia miezaka ny hampianatra ahy amin'ny alalan'ny fitsapana ity)…Andriamanitra hitahy anao foana ny diany Lee, Mahagaga fa ny fanompoana mahatratra antsika (ny olona masina any Afrika) ary na dia mbola tsy nihaona, Tsapako toy ny fantatro anao manokana aho satria afaka mifandray amin'ny zavatra rehetra lazainao. Ary satria ny mozika tena mananatra, mampirisika, manitsy, mampianatra ahy!….. Stay voatahy!!!!!!!!!
pelumi • Novambra 3, 2013 amin'ny 10:03 PM • navalin'i
hitahy anao BroTrip
KevinSteele • Novambra 7, 2013 amin'ny 9:02 PM • navalin'i
“Ny fanetren-tena no zava-dehibe kokoa noho ny fahasambarantsika.” Tena voa ahy ny olona. Fa tsara foana ny fanaovana mozika sy Andriamanitra anie hitahy.
Sherice • Desambra 2, 2014 amin'ny 9:53 PM • navalin'i
Velom-pankasitrahana aho ary nampahery izany…amena!